Iwo wekutanga kutumira ePinePhone akatotanga kuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iwo wekutanga kutumira ePinePhone akatotanga
Kwemwedzi yakati wandei ikozvino,Pano pane iyo blog iyo PinePhone yakatariswa, zvinova un yakachipa Linux yakavakirwa smartphone uye izvozvo yakavakwa yakatenderedza imwe yezvisikwa zvePine64, ivo vachatora hwaro hwePine A64 imwechete bhodhi komputa kutanga maitiro ekugadzira, kugadzira uye kuvaka iyo PinePhone. Pine64 iri iye anogadzira uye mutengesi kuseri kwePinebook, yakaderera-mutengo Linux-based laptop.
Nekudaro, kugadzira iyo smartphone haina basa, kunyangwe chinhu chikuru ndechekuti inomhanya Linux seyakanyanya system (Nenzira imwecheteyo, chimwe chinhu chisina kurova musika) asi chinonakidza chinhu nezve iyo PinePhone kubheja uye kuti inoipa kukosha, ndeyekuti inobvumira vashandisi kusarudza yavo sisitimu yekushandisa sezvingaitwa nemushandisi paPC.
Nekuzivisa kwekusika uye kutanga kwekugadzirwa kwemidziyo, mushandirapamwe wakatangwa kufano-gadzira chigadzirwa (Iyo Pine64 yaive nemari hombe yekudyara uye yakave nechokwadi kutengeswa kwemidziyo yekutanga).
Chekutanga batch yePinePhone yakaburitswa
Pakati pegore regore rapfuura, Pine64 yanga ichipa nhau nezve kusimudzira uye kugadzira pamwe nezvitsva uye zvitsva zvakagadzirirwa chigadzirwa chekupedzisira, icho ikozvino mushure memwedzi yakati wandei maitiro ekuendesa akatanga kubva pabatch yekutanga yePinePhone.
Uye ndizvo izvozvo kuburikidza nepositi pablog rake akazivisa kutanga kwekutumiraKune ese mapato anofarira eiyo yekutanga batch yeiyo Yakatemerwa PinePhone (Braveheart Edition) batch iyo yatove isipo muchitoro.
Chiziviso chinogovera zvinotevera:
Tikugashirei 2020. Ndinovimba rino igore rinobudirira rekukura kwakanyanya kwenharaunda yedu. Yakanga iri kutanga kwakabatikana kusvika pagore uye ndinotarisira kuti nhanho yacho inoramba ichikwidza nePinebook Pro uye PinePhone Braveheart edition zvinyorwa pamwe nezviziviso kubva kuFOSDEM.
Kunyange, kune avo vanofarira kugona kuwana chidimbu haifanire kuora moyo, nekuti Pine64 yakazivisa kuti kutanga kwe Kupararira kwemazhinji kugadzirwa kwakarongerwa Kurume (zvirinani mumavhiki mashoma).
Sezvakambotaurwa, mutengo weiyo smartphone uri $ 150 Uye chishandiso chakagadzirirwa vanofarira vakaneta neAroid uye vanoda kuwana zvakazara inodzorwa uye inodzivirirwa nharaunda zvichibva pane yakavhurika dzimwe Linux mapuratifomu.
Padivi re Hardware, yakagadzirirwa kushandisa zvinotsiviwa zvinhu: Mazhinji emamojuru haana kutengeswa, asi akabatana kuburikidza neanosvikika zvishwe, izvo zvinobvumidza, semuenzaniso, kana iwe uchida kutsiva iyo default kamera neiri nani mhando imwe.
Iyo midziyo inodamburwa ne Hardware, mune izvo zvikamu zvine LTE / GNSS, WiFi, maikorofoni uye masipika. Uye zvakare, zvinofungidzirwa kuti kubviswa kwakazara kwefoni kunogona kuitwa mumaminitsi mashanu.
Kana chiri chikamu chinonakidza chechigadzirwa, mifananidzo ye boot zvichibva pane anotevera masisitimu anoshanda:
Postmarket OS iri kuvandudzwa ne KDE Plasma Mobile
Ubuntu Touch iyo inochengetwa neUBPorts,
Iyo Sailfish Chikamu Chakavhurika Platform
Kune rimwe divi, basa parizvino riri kuenderera kugadzirira mufananidzo webhutsu neNixOS.
Default, iyo postmarketOS nharaunda yakatangwa-kuiswa kuyedza makuru masisitimu. Iyo software nharaunda inogona kutorwa pasi zvakananga kubva kune iyo SD kadhi pasina kukosha kwekupenya.
Finalmente chechikamu chezvikamu zvekupedzisira zvakasimbiswa zviri pamutemo chishandiso chakavakirwa mu:
ARM Allwinner A64 Quad Core SoC ine Mali 400 MP2 GPU
yakagadzirirwa 2 GB ye RAM
skrini 5,95-inch (1440 × 720 IPS)
Micro SD (ine rutsigiro rwekubhowa kubva kune SD kadhi)
16 GB yemukati eMMC
USB-C doko ine USB Inobata uye combo vhidhiyo kuburitsa yekubatanidza monita
Wi-Fi 802.11 / b / g / n kubatanidza
Makaralı 4.0 (A2DP)
makamera maviri 2 uye 5Mpx
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwo wekutanga kutumira ePinePhone akatotanga
Superb muLinux inoonekwa zvakare kuitira kutsigira Windows 7
Zorin Grid: gadzirisa makomputa ese muboka rako zvakapusa seimwe